Individual Lending Loan Officer (Yangon) at Early Dawn Microfinance
Job Reference: MJ1580378665362
 Conduct promotional activities and identify potential clients of the specific market segment for the Individual Lending Unit in his/her sales territory.
 သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေဒေသအတွင်း တစ်ဦးချင်းချေးငွေဌာန အတွက် စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် တိကျခိုင်မာသော စျေးကွက်အတွင်းရှိ အလားအလာရှိသော ချေးငွေယူမည့်သူများ ရှာဖွေ စုဆောင်းရရှိရေး
 Ensure data and information in loan applications is accurate and of acceptable quality, and ensure also authenticity of documentation.
 ချေးငွေလျောက်လွှာတွင် မှန်ကန်တိကျမှုရှိပြီး လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ခံရရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ သေချာစွာစစ်ဆေး ကောက်ယူခြင်း
 Conduct site visits and reference checks at and around client’s business premises to verify business operations.
 ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုကို အတည်ပြုစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း ပရဝဏ် နှင့် အနီးတဝိုက်တွင် သွားရောက်လည်ပတ ်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
 Conduct home verification visits and reference checks to verify the residency of potential customers.
 အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ နေအိမ်သို့သွားရောက်၍ ၎င်းပေးအပ်ထားသည့် အိမ်ထောင်စုပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းစာရင်း အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးခြင်း
 Evaluate the willingness and capacity to repay of new and existing clients following DAWN’s loan evaluation methodology.
 Dawn မှချမှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတိုင်း ချေးငွေယူသူ အသစ် နှင့် အဟောင်းတို့၏ ပြန်ဆပ်လိုစိတ် နှင့် ပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းများကို ချင့်ချိန်ခန့်မှန်နိုင်ခြင်း
 Participate in credit committees presenting loan recommendations for approval.
 ချေးငွေခွင့်ပြုရန် အတွက် ချေးငွေစီစစ် အကဲဖြတ်အဖွဲ့ နှင့် အတူ ဆွေးနွေးထောက်ခံခြင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်း
 Develop business relationship with clients to support their business success and cultivate loyalty to DAWN.
 ငွေချေးသူများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် ငွေချေးသူများနှင့် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်း
 Monitor client’s business progress to identify any potential problems.
 ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို သိရှိနိုင်ရန် ငွေချေးသူ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း
 Manage and recover late payments according to institutional procedures.
 အဖွဲ့အစည်း၏ ချက်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အညီ ငွေနောက်ကျမှု ပြဿနာကိုင်တွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း
 Assist to IL Manager to achieve targeted result regarding active borrowers and outstanding loan portfolio of branch
 ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လျားထားချက်များဖြစ်သည့် ချေးငွေယူသူများ၊ ထုတ်ချေးမည့်ငွေပမာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းများ ပြည့်မှီနိုင်ရန် အတွက် မန်နေဂျာအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း
 Perform other tasks as assigned by supervisor.
 ကြီးကြပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တခြားသော တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း
 Myanmar national.
 University graduate in finance, economics, accounting or related field.
 တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ စီပွားရေး (သို့) ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး (သို့) စာရင်းအင်းတို့ နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်သော ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
 One year working experience as microfinance individual loan officer or in retail banking or sales preferably in the specific market segment for the Individual Lending Unit.
 တစ်ဦးချင်းချေးငွေ အရာရှိရာထူးဖြင့် အနဲဆုံး တစ်နှစ် အတွေ့ကြုံရှိရမည် (သို့) တစ်ဦးအလိုက်ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင် တိကျခိုင်မာသော စျေးကွက်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ဖူးသော အတွေ့ကြံု ရှိရမည်။
 Excellent service and communication skills.
 ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းအပေါ် အထူးကောင်းမွန်ရမည်။
 Computer proficiency in word processing and spreadsheets.
 ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
 Strong financial analysis skills.
 ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီစစ်တွက်ချက်မှုများ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။
 Strong intuition; able to assess character of potential clients.
 အလားအလာရှိသော ငွေချေးသူ၏ စရိုက်လက္ခဏာများကို လေ့လာအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်
 Willingness to work in low-income neighborhoods and spend long time in the field.
 လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များအတွင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်။
Medical Benefits Life Insurance Working Days -> Mon - Fri
Do you have experience in MFI industry?:
Which locations do you prefer to apply?: